Iko Amazon inonzi keyword finder tool iwe unondikurudzira ini zvakanakisisa?
Kushanda kwakakodzera mu-yakadzama kutsvaga kutsvaga mazwi kunenge kwakakosha kuAmerica yako zvinyorwa zvinyorwa, sezvazviri pakushandisa nzira yakarurama mu Search Engine Optimization. Hazvina musoro, mutengesi wose wekutengesa ecommerce anofanira kunge ane zvimwe zvinonzi Amazon keyword finder zvigadziro zvekukwevera pamwe chete chaizvoizvo kuita maitiro ekutengeserana. Vachingovimba chete nedhiyabhorosi yedzinza redu, uye kushanda nguva dzose kuti uwedzere mapeji ako ezvigadzirwa zvekuvandudzwa kutsvaga kutsvaga paIndaneti - ichi ndicho chinokonzera kutengesa kweimwe ecommerce webstore. Saka, pasi apa ndichaenda kunyoresa mamwe maAmerica anokosha mazita ekutsvaga uye mashandisirwo ekutsvakurudza - kugara nguva dzose uye kuramba uchitsika danho rimwe mberi kwevadzidzi vako vari pedyo. AmzSuite - inonzi Amazon keyword finder software iyo inogona kubatsira zvikuru kuziva zvose pamusoro pekutengesa zvakagadzirwa-shred ye data yega yega
Best Sellers, Top Rated Features, uye Hot Hot Releases. AmzSuite ine chimwe chinhu chakakomba 67 zviuru zvemazana (Amazon UK uye Amazon US) uye inokodzera zvakanakisa kwebhizimisi guru reEcommerce, uye kunyange nyanzvi dzakadzidziswa zvakanaka muSEO - curso de fotografia online con diploma. Zvechokwadi, zvakapiwa kuti ivo vane mukana wekuziva kuti vanogona sei kuita zvakawanda kubva mune zvishandiso zvine simba rakadaro.
Kparser - imwe imwe nyanzvi yeAmazon inoshandiswa, iyo nguva nenzira chaiyo chaiyo. Chinhu chacho ndechekuti Kparser inogona kutsigira kuderedza-kutengesa vatengesi vane keyword yakagadzirwa uye mushure mutsva mutsara mazano mazano. Kuunganidza zvimwe zvakadzama deta nemafuta akavandudzwa, sarudzo iyi ndiyo sarudzo yakanakisisa yevatengesi avo vanotowana zvinhu zvakawanda zvokuita. Ndinoreva kuti chinhu chinoshamisa cheKparser ndechokuti zvishomanana-zvinyorwa zvinoshandiswa pakugadzirisa, kusarudza, nekuisa zvikamu zvitsva zvinogona kugadziriswa zviri nyore pedyo nekupenya kwechiedza.
MerchantWords - ndiyo yechitatu yepamusoro Amazon keyword finder tool, kunze kwekushandiswa nevatungamiri vevatengesi vepamusoro vari kushanda kune imwe ecommerce platforms zvakare. MerchantWords tool ine database yakakura inogadzira mamiriyoni 170 eAmerica mazwi anokosha anoshandiswa nevashambadzi vezvokudya zvezuva nezuva. Pakati pevamwe nhare dzakasimba dzemubatsiri uyu wepaIndaneti, ndinoda kuratidza kuti ingadai yakanyatsogadziriswa sarudzo kunyanya kune vane ruzivo vashoma kana kuti vanotanga kutengesa-kutengesa vatengesi - hapana huno hwakasimba mune SEO inoda kuita zvakawanda kubva pane yako keyword kutsvakurudza uye kushandiswa kwakashandiswa kwekuuraya chaizvo zvakagadzirwa nemhando.
Keyword Tool Dominator - inouya sekupedzisira yakasarudzwa nheyo yezvinyorwa kunyoreswa nhasi. Vanhu vanoti zita rechigadziri rinotaura pacharo - sezvo kune vanhu vanopfuura 15 000 vakamira vamire vachishanda pa keyword database kuti vavandudze kutengesa kwavo, uye kunyange kukwirira kumusoro kune imwe nzvimbo, somuenzaniso nemugwagwa wega paGoogle. Saka, kana iwe uchida kungoziva zvakanakisisa mashoko, saka iwe unofanira kunge uchiwana Keyword Tool Dominator yako-stop-shop-ingoedza nheyo yayo yekutanga pasina, uye funga kujoina mharaunda nehuwandu hwemafuta yakawanikwa pane chimwe chinhu chinenge madhora makumi mashanu .